सम्भावना केलाउँदै सकियो लगानी सम्मेलन :: Setopati
सम्भावना केलाउँदै सकियो लगानी सम्मेलन
अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतावासको आयोजनामा सञ्चालित एक दिने लगानी सम्मेलन सम्भावनाका पाटा केलाउँदै सकिएको छ।
नेपाल र अस्ट्रेलियाबीचको व्यापार, लगानी तथा साझेदारी वृद्धि गर्ने उद्धेश्यका साथ दूतावासको आयोजना तथा महावाणिज्यूदतको सहयोगमा एक दिने लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
अनलाइनमार्फत गरिएको सम्मेलनमा नेपाल सरकारका सचिवद्वय चन्द्रकुमार घिमिरे, डा. बैकुण्ठ अर्याल, लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, कृषिविज्ञ डा. किशोर दहाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत अस्ट्रेलियन राजनीतिक दलका नेता तथा व्यवशायीको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले सम्भावनाका कयैन आधार पेश गरे पनि निष्कर्ष र निचोड भने नेपाल सरकारको तदारूकता र लगानीको सुरक्षाका विषयमा देखिन्थ्यो।
नेपालमा लगानीको अवस्था, सरकार तथा स्थानीय उद्योग वाणिज्य महासंघले पुर्‍याउन सक्ने सहयोगबारे नेपालबाट सहभागि अधिकांश वक्ताले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए। लगानी सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल, नेकपा नेता भीम रावल लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
ब्यस्तताका कारण कार्यक्रममा सहभागी नभएका अस्ट्रेलियाली अर्थमन्त्री साइमन बर्मिङ्घमले भिडियो सन्देशमार्फत नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच लामो सम्बन्धलाई अघि बढाउन आफू इच्छुक रहेको बताए । उनले नेपाली समाजको बढ्दो प्रभाव र नेपाली विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाली शैक्षिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको सहयोगबारे चर्चा गरेका थिए।
कोरोनाको बढ्दो प्रभावका कारण यस वर्ष प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हुन नसकेपछि वेभिनार मार्फत गरिएको थियो। यसअघि भने दुई वर्षअघि लगानी सम्मेलन मेलबर्नमा आयोजना गरिएको थियो।
कार्यक्रममा सगरमाथा चढेकी अस्ट्रेलियन युवती तथा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेकी अस्ट्रेलियाली महिलाले नेपालको भौगोलिक सुन्दरता र न्यानो हार्दिकताको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए।
अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूत महेशराज दहालले कोरोनाको प्रभावका कारण फेस टु फेस गर्न नसकिए पनि अनलाइन मार्फत भए पनि दुई देश बिचको लगानी तथा ब्यापार प्रर्वधनमा यसले टेवा पुग्ने बताए। उनले दुई देश बिचको ब्यापार र पारवहन सम्भावनाका बारेमा जुन निचोड निक्लिएको भन्दै त्यो साच्चीक्कै स्वागतयोग्य भएको बताए।
कोरोनाको कहालिलाग्दो अवस्थाका बिच सम्भावनाको खोजी गर्नु आफैंमा महत्वपूर्ण विषय भएको र यसले मुलुकको हितमा यस्तो कार्यक्रम हुनु उपलब्धिमुलक भएको एनआरएनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मन केसीले बताए।
कार्यक्रममा एनएसडब्लुका महाबाणिज्यदूत दिपक खड्का र भिक्टोरियाका महावाणिज्यदूत चन्द्र योन्जनले समेत आफ्ना अनुभव साटेका थिए।
कार्यक्रम उत्कृष्ट भए पनि लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको अस्ट्रेलियालाई आकर्षित गर्न नेपाल सरकारले लगानीको सुरक्षा र सहजीकरण अनि उपर्युक्त वातावरण नबनाएसम्म हाम्रा टिप्पणी र प्रतिवेदन उपयोगी नहुने एनआरएन अस्ट्रेलियाका महासचिव ज्ञानेन्द्र रेग्मीले बताए।
केही हप्ता अघि मात्र अष्ट्रेलियाका ठूला परियोजनामा नाम कमाएको फोर्टेस्क्यू मेटल ग्रुपले नेपालमा ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला केही जलविद्युत परियोजना र ग्रिन प्रोजेक्टलगायतका केहि महत्वपूर्ण योजनामा नेपालमा लगानी गर्ने सोचका साथ आफ्नो प्रतिनिधिलाई नेपाल पठाएको थियो । तर त्यसको उपलब्धि के भयो भन्ने विषय बाहिर आउन सकेको छैन।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २५, २०७७, ०४:४४:००